Izindaba ze-Geo-engineering - AutoDesk, Bentley ne-Esri - Geofumadas
NgoJuni, 2019 ArcGIS-ESRI, I-AutoCAD-AutoDesk, Innovations, Microstation-Bentley
I-AUTODESK ANNOUNCES KUKHULUMA, UKUPHUMA NOKUBHILA 3D 2020
I-Autodesk yamemezela ukuqaliswa kwe-Revit, InfraWorks ne-Civil 3D 2020.
Nge-Revit 2020, abasebenzisi bazokwazi ukudala amadokhumenti aqondile futhi anemininingwane echaza kangcono inhloso yokuklama, oxhumanisa idatha futhi ivumela ukubambisana nokulethwa kwamaphrojekthi nge-fluidity enkulu. Kuzosiza ukunciphisa isikhathi esinikezelwe imisebenzi yememori futhi kuzofaka isandla ekukhiqizeni umsebenzi wekhwalithi ephezulu.
I-Civil 3D 2020
I-3D ye-2020 ye-Civil inikezela ngokuthuthukiswa ekusebenzeni nokusabalalisa, ukuthuthukisa ukuklama kwe-BIM nokusebenza kahle, ikakhulukazi kumaphrojekthi amakhulu nezinkimbinkimbi. Inguqulo yakamuva ihlanganisa izici ezintsha ezifana: I-Dynamo ye-Civil I-3D, eyokwenza imisebenzi ephindaphindiwe iphinde iphinde isekele umsebenzisi ukuthola imodeli yabo eminingi.
Nge-InfraWorks 2020, i-Autodesk iyaqhubeka nokuzinikela kwayo ekuhlanganisweni kwe-BIM ne-GIS. Ukubambisana no-Esri kuye kwavumela ukuthi kusetshenziswe iningi lemali ye-GIS etholakalayo esidlangalaleni noma egcinwe ngaphakathi, ngendlela elula eyenqabela ukuguqulwa okuningi okwakufanele kwenzeke ngaphambili. Le nguqulo yenezela ikhono lokulondoloza idatha ehleliwe ye-InfraWorks ezitolo ze-Esri zedatha.
U-Esri uthola indoo.rs futhi umemezela ukwethulwa yi-ArcGIS Ngaphakathi
I Februwari 28 2019, Esri, umholi wezwe indawo ukukhalipha, yamemezela yokufuna GmbH zasendlini, umholi ubuchwepheshe global positioning zasendlini uhlelo (IPS) izixazululo.
Isofthiwe ye-indoo.rs izoba yingxenye ye-ArcGIS Ezindaweni Zase-Esri, umkhiqizo omusha we-mapping ovumela ukuhlelwa kwezinto zangaphakathi ezisebenzayo, izitolo, izindawo zokuhweba, izikhumulo zezindiza nokuningi. Futhi, ukutholakala kuzohlinzeka abasebenzisi be-platform ye-Esri ye-ArcGIS ngezinsizakalo zendawo ezididiyelwe ze-IPS ukusekela ukudweba ngaphakathi nokuhlaziywa. Indlunkulu ye-indoo.rs izophinde ibe isikhungo esisha se-Esri R & D esiseVienna, e-Austria, sigxile ekuphathweni kwe-IPS.
"Indoo.rs ungumhlinzeki ohola we-software ye-IPS nezinsizakalo, esebenza nezinhlangano emhlabeni wonke njengezikhumulo zezindiza zomhlaba wonke, iziteshi ezinkulu zesitimela kanye nesikhulu senkampani, futhi ngiyajabula ukwamukela inkampani kumndeni wakwa-Esri," kusho uBrian. Isiphambano, umqondisi wezinsizakalo zobuchwepheshe e-Esri. «Ubuchwepheshe, isipiliyoni nobuholi be-indoo.rs ensimini ye-IPS kuyoba nenzuzo enkulu kumakhasimende ethu afisa ukuletha amandla we-SIG ezindaweni ezingaphakathi».
"Ukuba yingxenye ebalulekile yephothifoliyo yomkhiqizo ka-Esri kusisiza ukuba siqhubeke nokuhlinzeka ngezinsizakalo zethu ezingeni eliphakeme kakhulu lochwepheshe," kusho uBernd Gruber, umsunguli we-indoo.rs. "
"Sibonile ukuthi IPS emakethe uqubuke eminyakeni yamuva," kusho uRainer Wolfsberger, oyisikhulu indoo.rs, "futhi yethu amakhasimende ibhizinisi baye babonisa isithakazelo esikhulu ukuhlanganiswa okujulile IPS technology, kanye nezinzuzo ngaleyondlela akhululeke yalesi sigaba kuzo zonke izigaba zenhlangano yakho ».
I-Bentley Systems iyatshala imali kuMisebenzi Yamanzi Edijithali yezinhlelo zengqalasizinda yamanzi angcolile
I-Bentley Systems isimemezele ukutshalwa kwezimali okuhlelekile ku-Digital Water Works, isisombululo somhlaba jikelele nesinomsebenzi wamawele edijithali, okwakhiwa kwezizinda ezihlakaniphile ze-hydrosanitary.
Lokhu kubambisana kuzokusiza izinkampani ukuba zandise ubuholi bazo, zilethe izixazululo ezingcono zamawele edijithali asetshenziselwa ingqalasizinda yezinkampani noma abatshalizimali abasetshenziswe emhlabeni wonke wamanzi angcolile emhlabeni wonke.
I-Digital Water Works yayaziwa ukusiza amanzi namanzi angcolile asebenzisa uhlelo oluyisisekelo se-geospatial ye-geospatial elula, eguquguqukayo futhi ephelele. Ngokwesivumelwano, inkampani ihlose ukufaka izicelo zayo zokuhlanganiswa ezungeze isofthiwe yezohwebo (i-COTS), njenge-Bentley Systems 'OpenFlows ne-iTwin iminikelo. I-Bentley Systems izohlinzeka amalayisensi ngqo kumakhasimende e-Digital Water Works. Uzoba nelungelo lokuqoka abaqondisi ababili abazoba yingxenye yoMkhandlu weMisebenzi yamanzi weDiamanzi.
Ngesinye isikhathi, uPawulu F. Boulos, umsunguli kanye CEO of Digital Water Works, wathi: "Siyajabula futhi ehloniphekile ukuthola le utshalomali amasu Bentley. Iphakethe yemikhiqizo twins digital ingqalasizinda sitawungeniswa izigaba ezako izinyanga ezinhlanu kuya kweziyishumi, futhi ngenyanga ezayo bazosungula uhlelo lokwamukelwa kwesikhathi Izinsiza izinkampani amanzi anokungcola zobunjiniyela abafuna ukusiza nge izinhlelo design umkhiqizo bese wenza isofthiwe beta ".
UGreg Bentley, oyi-CEO ye-Bentley Systems wabelane: "Ukutshalwa kweBentley Systems ku-Digital Water Works, kusho ukuhlonishwa kwethu ukuthi inhlangano ebaluleke kakhulu ekudidiyeleni kwedijithali iyodlala indima ebalulekile ekusizeni abanikazi bezingqalasizinda ukuba benze okusemandleni abo. amawele adijithali.
Njengoba kunikezwa ukuhamba phambili kokuthuthukiswa kwedijithali ngezinsiza zomswakama we-hydrosanitary wezwe, bekungeke kube nomuntu osebenza kahle kunoDkt. Paul Boulos ekuqondiseni izinjini zakhe nezinkampani zobunjiniyela, ngokusebenzisa iDameric Water Works, ukuze aqaphele amathuba angenamkhawulo manje ukuvula twins digital. "
Kuthathwa kusuka Umagazini we-Geo-engineering -Junio ​​2019
Thumela Previous«Langaphambilini Izindaba zobuchwepheshe ku-Geo-engineering - Juni 2019
Post Next Umlando - I-FME World Tour BarcelonaOkulandelayo »